कांग्रेसमा गुट अदलबदल – आफ्नो समाचार
कांग्रेसमा गुट अदलबदल
Afno News — २३ चैत्र २०७४, शुक्रबार ०९:०६0comment
कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनमा पदाधिकारीसहित ६४ खुला केन्द्रीय सदस्यमा शेरबहादुर देउवा पक्षका ३६ र रामचन्द्र पौडेल पक्षका २८ निर्वाचित भएका थिए । देउवा पक्षमा खुमबहादुर खड्का समूह पनि सामेल थियो । उनको समूहबाट खड्कासहित शंकर भण्डारी, पुष्पा भुसाल, देवेन्द्रराज कँडेल र अजयकुमार चौरसिया पनि थिए । तर, केही दिनअघि खड्काको निधन भएसँगै सो समूहमा रहेका चार सदस्य कुन पक्षतिर लाग्छन् भन्ने बहस कांग्रेसभित्र सुरु भएको छ । अब पदाधिकारी चयनको प्रस्ताव आए यी नेताहरूले देउवालाई नै साथ दिन्छन् या छुट्टै समूहका रूपमा उभिन्छन् भन्ने टुंगो छैन् ।
कांग्रेसमा पदाधिकारीको मनोनयन निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यले गर्नुपर्ने प्रावधान छ । महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन भएको दुई महिनाभित्र पार्टी संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने भए पनि दुई वर्षसम्म अपूर्ण नै छ । निर्वाचन समीक्षा बैठकपछि देउवाले पदाधिकारी चयनको प्रस्ताव ल्याउँछन्ल्या/उँदैनन् चासोसाथ हेरिएको खबर आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
पौडेल पक्षबाट जित्नेमध्ये डा. नारायण खड्का र डा. मीनेन्द्र रिजाल अहिले प्रस्ट रूपमा दुवै गुटमा खुलेका छैनन् । यी दुवै नेता देउवा र पौडेल पक्षसँग सम्पर्कमा छन् । चुनावी समीक्षा बैठकमा पनि यी दुवै नेताले गुटबन्दीभन्दा माथि उठ्नुपर्ने मत प्रकट गरिरहेका छन् । देउवा संसदीय दलको नेतामा चुनिँदा यी दुवैले देउवालाई भोट हालेको आशंका कांग्रेसभित्र छ । सभापति प्रणाली भएकाले सभापतिलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मत नेता खड्काको छ ।
कांग्रेसको विधानअनुसार महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको दुई महिनाभित्र पदाधिकारीसहित पार्टीका सबै संयन्त्र टुंगिनुपर्ने हो । तर, १३औँ महाधिवेशन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पदाधिकारी चयन भएका छैनन् । चुनावी समीक्षा बैठकमा प्रकाशमान सिंह, डा. शेखर कोइरालासहितका नेताले दुई वर्षमा पनि पदाधिकारी मनोनयन नभएपछि अब त्यतातिर लाग्न नहुने धारणा राखेका छन् । गगन थापा, प्रदीप पौडेलसहितको युवा समूहले पनि छिटो महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकमा लिखित रूपमै राखेका छन् ।
तर, सभापति देउवाले पदाधिकारीसहित पार्टीका सबै तहलाई छिटै पूर्णता दिने केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महतले बताए । ‘सभापतिले अब छिटै पदाधिकारीदेखि पार्टीका सबै तहलाई पूर्णता दिने बताउँदै आउनुभएको छ,’ महतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अब पदाधिकारीदेखि विभागसम्म सबै विषय टुंगिनेछन् ।
महामन्त्रीका लागि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र पूर्णबहादुर खड्का प्रमुख दाबेदार हुन् । नेता बालकृष्ण खाणले पनि आकांक्षा राखेका छन् । तीनमध्ये कार्कीप्रति देउवा सकारात्मक छन् । तर, सहहामन्त्री भइसकेका खड्का र देउवालाई नजिकबाट साथ दिँदै आएको भन्दै खाणले पनि बलियो दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन् । सहमहामन्त्रीमा देउवा पक्षका खाणसहित, डा. प्रकाशशरण महत, खड्का समूहकी पुष्पा भुसाल र पौडेल पक्षका दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहितका नेताले आकांक्षा देखाएका छन् ।
बार्सिलोना लेभान्टेसँग पराजित
स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधा यस्तो छ